नेम्वाङले भेटे ओलीलाई, सभामुख बनाउन आग्रह – ईमेची डटकम
नेम्वाङले भेटे ओलीलाई, सभामुख बनाउन आग्रह
कृष्णबहादुर महरा जबर जस्ती कर णी मा फसेपछि संघीय संसदको सभामुख पद रिक्त छ । उक्त पदको लागि आकांक्षीहरुले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् । संविधानमै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले अब सभामुख को बन्छ ? भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।
स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले रुचि देखाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै आफ्नो रुचिबारे जानकारी गराएका छन् । ओलीले पनि नेम्वाङलाई नै उक्त भूमिकामा उतार्न खोजेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो समय सदनको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठेपछि ओली पनि निवर्तमान सभामुख महराप्रति रुष्ट बनेका थिए । महराको यौ न काण्ड त ओलीको लागि ‘कुचोले बढानुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो’ भनेझैं भयो । नेम्वाङ सभामुख भए सदनको प्रभावकारिता बढ्ने र सरकारका बारेमा पनि जनस्तरमा आलोचना नहुने ओलीको विश्वास छ । नेम्वाङ ओलीले रुचाएका नेतामध्येमा पर्छन् ।
उता, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेम्वाङलाई नै रुचाएको बुझिएको छ । हुन त नेकपाभित्र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट अग्नि सापकोटा र ओनसरी घर्तीले रुचि देखाएका छन् । नेकपाबाट अहिले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे छिन् । यदि नेकपाले सभामुखमा दाबी गर्ने हो भने उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।